Apple wuxuu sii daayaa Beta saddexaad si loogu horumariyo tvOS 11.1 iyo watchOS 4.1 | Waxaan ka socdaa mac
Sidii caadiga ahayd, markii mashiinnada beta ay bilowdaan, Apple ayaa ka faa'iideysata oo waxay bilawdaa betas aaladaha oo dhan shalayna ma noqon karto wax ka reeban. Shalay gelinkii dambe Apple wuxuu sii daayay beta-kii saddexaad ee iOS 11 oo ay weheliso sidoo kale tvOS 11.1 iyo watchOS 4.1 beta saddexaad, ka tagida beta u dhiganta macOS 13.1. Waqtigan xaadirka ah ma ogin sababta Apple uga tagtay nuuca nidaamka hawlgalka desktop desktop, laakiin maahan wax dareen gaar ah soo jiidaya sidoo kale maadaama aysan aheyn markii ugu horeysay ee ay dhacdo runtiina aysan noqon doonin tii ugu dambeysay.
Betas-kani wuxuu gaaraa horumariyayaal hal toddobaad ka dib markii la bilaabay beta labaad dhammaan nidaamyada hawlgalka moobiilka ee Apple. Dhismaha betasyada kaladuwan waa kuwa soo socda:
Sidii betasyadii hore, waxay umuuqataa cusbooneysiinta ugu weyn ee ugu horeysa nidaamka qalliinka ee Apple Watch iyo Apple TV inaysan keenin war badan, uguyaraan wixii aan kusoo aragnay seddexdan betas ee ugu horeysa. Nooca keeni doona tiro aad u fara badan oo muuqaallo cusub ah wuxuu noqon doonaa macruufka 11.1, oo ah nooca ugu dambayntii la oggolaado isku dhejinta fariimaha adoo adeegsanaya iCloud adoo adeegsanaya Mac-gaaga iyo qalabka kale.
Sidoo kale waxay noo soo bandhigi doontaa soo celinta waxqabad badan oo xagga iOS ah iyada oo loo marayo 3D Touch function, Muuqaal ku lumay beta-kii ugu horreeyay ee iOS 11 sabab la'aan laakiin dib ayaa looga heli doonaa codsi caan ah. Waxaan rajeyneynaa, inaysan waqti dheer ku qaadan doonin wiilasha Cupertino inay soo bandhigaan tvOS u dhigma 11.1 beta oo loogu talagalay dadka isticmaala beta bulshada, malaha maanta gelinka dambe waqtiga Isbaanishka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Alaabada Apple » Apple TV » Apple wuxuu bilaabayaa beta seddexaad ee tvOS 11.1 iyo watchOS 4.1
Laba maalmood ka hor. Saaxiibka sayniska kombiyuutarka laba maalmood waa goor dambe.
Ku jawaab Juan blay
Microsoft Outlook ee mac waxay bilaabaysaa naqshadeynta "la fududeeyay", oo la mid ah arjiga macruufka
Kuwani waa wararka ku saabsan qoraallada 'macOS High Sierra'